September 2013 ~ လမင်းတရာ
IN Burning - ON 11:47 PM No comments
DVDFab 9.0.6.9 Beta | 46.2 MB
IN Photo and Media Editor Tools - ON 11:01 PM No comments
NeoPaint 5.1.2 | 12.4 MB
ရှေ့မှာ အကြိမ်ကြိမ်တင်ပေးခဲ့ဖူးသလို အခုဗားရှင်းအသစ်လေးရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါလေးက Windows Paint Editor လို ပုံတွေပြင်ဆင် ပုံဆွဲ စတာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကောင်လေး
ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူကတော့ အခြား အသုံးဝင် Edit Tools တွေပါဝင်တဲ့အပြင် Photoshop နီး
Import photos and artwork from your scanner, digital camera, CD, USB drive or the Internet.
Windows XP, Vista, Windows7or Windows 8-(32-bit / 64-bit )
A hard disk with 11MB free space;
32MB Memory (1GB+ recommended for larger images);
Home Page : http://www.neosoftware.com/
Driver Genius Professional 12.0.0.1328 Full With Patch
IN Driver Software - ON 8:36 PM 1 comment
Driver Genius Professional 12.0.0.1328 | 14 MB
ဒီ Software အသုံးပြုပြီး မိမိကွန်ပျူတာအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေ Out Of Date ဖြစ်နေတဲ့ Driver တွေကို Auto ရှာဖွေ, ဒေါင်းယူ Update လုပ်ပေးတဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ..Driver တွေ Update ဖြစ်
IN Burning - ON 9:23 PM No comments
Open DVD ripper v3.50 build 509 | 10.2 MB
အရှေ့မှာတင်ပေးထားတဲ့ DVD Cloner 2013 နဲ့ တွဲသုံးနိုင်မယ့် ဒီကောင်လေးက
DVD ထဲက Movies, Audio အတော်များများကို Rip လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး background, Output Effect, Watermarks စတာတွေကိုလည်းမိမိစိတ်
Open DVD ripper3can convert 2D movies to 3D movies. You can choose different 3D formats such as Red/Cyan, Red/Green, Red/Blue, Blue/Yellow and so on, as well as adjust the 3D depth to get your desired output effects.
Open DVD ripper3isapowerful ripping tool to rip your favorite DVD movies for you to play on nearly all the popular used multimedia devices, such as iPod, iPhone, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 3GS, iPad 1, iPad 2, The new iPad, AppleTV, Xbox 360, Mobile Phone, GPhone, PSP, PS3, BlackBerry, Sony, Archos, Windows phone, HTC mobile, Motorola mobile, Sony mobile and various other mobile phones.
Download>>>uppit (or) dropbox (or) Adrive
Mini Tool Power Data Recovery v6.8.0.0 full with Licenses
IN Recovery Software - ON 7:00 AM No comments
Mini Tool Power Data Recovery v6.8.0.0 |9MB
Recovery Tools တွေကတော့အမျိုးမျိုးပေါ်ထွက်နေတာပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း အဆင်ပြေ
မယ်ထင်တာ ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ရှာဖွေစမ်းသပ်ပြီး တင်ပေးခဲ့နေတာ အခု
ဆို နောက်ထပ် Recovery Tools အသစ်ကလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
NTFS5 and ISO9660, Joliet, UDF File system.
IDE/SCSI hard drive 64MB
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003, 100 MB of free space.
Home Page : http://www.powerdatarecovery.com/index.html
Download =>uppit (or) Adrive (or) AfileZ
Advanced SystemCare Pro 6.4.0.292 Full With Serial
IN Optimizer - ON 9:36 PM No comments
Advanced SystemCare Pro 6.4.0.292 | 22.3 MB
ရှင်းပြီးရင် Auto shutdown လုပ်ပေးထားဖို့ ပါလာတယ် ။ ဒီကောင်ကတော့ Stable and latest Version မို့ လို့ အသုံးလိုသူများ အောက်မှာယူလိုက်ပါဗျာ ။
ဒါကတော့ Latest Version ဖြစ်ပေမယ့် Aug လကတည်းကထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုက C-BOX မှာ တောင်းထားတာတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။
Version7ကတော့ Bata အနေနဲ့ပဲထွက်ရှိသေးပြီး အရှေ့မှာ တင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီကောင်ကတော့ Stable and latest Version လေးဖြစ်ပါတယ်။
Release Date (August 27,2013)
Home Page : http://www.iobit.com/advancedsystemcarepro.html
Download Trial =>mighty (or) tusfiles (or) AfileZ
Download Serial =>uppit (or) tusfiles (or) AfileZ
CCleaner v4.06.4324 (PRO+Business Edition) Full With Crack
IN Cleaner - ON 7:36 PM No comments
CCleaner Business Edition & Professional Edition | 4.3 MB
မြန်မာ ဘာသာနဲ့ Windows 8 မှာအသုံးပြုလာနိုင်တာကလည်း ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်း
သိတွေမို့အထွေအထူးပြောစရာမလိုတာကြောင့် LatestVersion လေးကိုအောက်မှာဒေါင်းသွား
Download=>uppit (or) tusfiles (or) solifiles